အောင်ဒင် | MoeMaKa Burmese News & Media
အောင်ဒင် – အမှတ်တရနေ့တစ်နေ့အကြောင်း
အောင်ဒင် – အမှတ်တရနေ့တစ်နေ့အကြောင်း သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၁၄ အမှတ်တရနေ့တစ်နေ့မှာ အဝေးကလာတဲ့လူတွေ အနီးမှာပဲရှိပြီး မတွေ့ကြတဲ့လူတွေ အမှတ်တရတွေ့ဆုံကြ အမှတ်တရကြေကွဲကြ အမှတ်တရနာကျည်းကြ အမှတ်တရစကားတွေပြောကြ လေးလေးနက်နက် အဓိဋ္ဌာန်တွေပြုကြ အနာဂတ်အတွက် ပြင်ဆင်ချက်တွေရေးဆွဲကြ...
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၁)
(တူမောရိုးသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၊ မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၄) မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ (အပိုင်း ၁) အောင်ဒင်၊ မတ် ၁၆၊ ၂၀၁၄ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အခြားဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအများစုလို...
မိုးမခမိတ်ဆွေ ၂ ဦးရဲ့ စာအုပ် Amazon Kindle အီးဘုတ်အဖြစ် ရောက်ပါပြီ
မိုးမခမိတ်ဆွေ ၂ ဦးရဲ့ စာအုပ် Amazon Kindle အီးဘုတ်အဖြစ် ရောက်ပါပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ အောင်ဒင် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို အဝေးကြည့် အနီးကြည့် (ပြည်သူ့ခေတ်ဆောင်းပါးများ...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၈၅၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – ၅၄ အောင်ဒင်၊...
မမျှော်လင့်ပဲ (Aung Din)
မမျှော်လင့်ပဲ အောင်ဒင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ မမျှော်လင့်ပဲ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် သေဆုံးသွားတယ် ဘဝသံသရာဆိုတဲ့ ရထားကြီးပေါ်က နှုတ်မဆက်၊ လက်မပြ ရုတ်တရက် ခုန်ချ၊ ဘာ့ကြောင့် မမျှော်လင့်ရတာလဲ သူက...
ဧရာဝတီ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမှတ်တရများ (အောင်ဒင်) မိုးမခစာအုပ်စင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၄ တရုတ်ပြည်ကြီးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ ပေးနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို အစကနေ ပိတ်ဆို့ပြီး မြစ်ဆုံဆည်ကြီး တည်ဆောက်မည့်စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ရေးသားခဲ့တဲ့...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၈၂၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၅၂ အောင်ဒင်၊ ဖေဖော်ဝါရီ...
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၈၁၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၅၁) အောင်ဒင်၊ ဇန်န၀ါရီ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – ၅၀
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၈၀၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၄၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် – ၅၀ အောင်ဒင်၊...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၄၆ – Aung Din
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၇၆၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် ၄၆ အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၉) – Aung Din
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၉) အောင်ဒင် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃၄၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၃) (၆)...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၅) – Aung DIn
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၅) အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အပိုင်း (၄၅) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ၂၀၁၃ နှစ်ချုပ်သုံးသပ်ချက် (က) (ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊...
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၈) – Aung Din
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၈) အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃၃၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၃) “ငြိမ်းချမ်းရေး….ဟိုး…အဝေးမှာ”…ဆောင်းပါးရှည် ၊...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၄) – Aung Din
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၇၂၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၄) အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၇) – Aung Din
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၇) အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃၂၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၃) ဒုတိယပင်လုံညီလာခံ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၃) (Aung Din)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၇၁၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၃) အောင်ဒင်၊ ဒီဇင်ဘာ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၂)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၇၀၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၂) အောင်ဒင်၊ နိုဝင်ဘာ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၁)
(ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၆၉၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်၊ ၂၀၁၃၊ စာမျက်နှာ ၁၈)မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို အနီးကြည့် အဝေးကြည့် (၄၁) အောင်ဒင်၊ နိုဝင်ဘာ ၆၊...
အောင်ဒင်ရဲ့ ကဗျာ လုံးချင်းစာအုပ် ထွက်ပြီ မိုးမခစာအုပ်စင်၊ နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၃ ကေကျု စာပေတိုက်ကထုတ်ဝေပြီး အမေရိကန်ရောက် ကဗျာဆရာ အောင်ဒင်ရဲ့ မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးဖွဲ့တဲ့ “ရန်ကုန်ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာစု (၂၀၀၀ –...
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၅)
ငြိမ်းချမ်းရေး…. ဟိုး… အဝေးမှာ (၅) အောင်ဒင် (ကုမုဒြာသတင်းဂျာနယ်၊ အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၃၀၊ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၃) ================== မညီညွတ်သော ညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုများ (ဒုတိယ) တိုင်းရင်းသားညီလာခံက...